Qubanaha » Gudoomiye Taabid oo badalay Qaab qoraalka Banaadir.+Warsaxaafadeed.
Gudoomiye Taabid oo badalay Qaab qoraalka Banaadir.+Warsaxaafadeed.
Dad badan ayaa durbaba la yaabay wax ka bedelka qoraal ee uu soo kordhiyay Guddoomiyaha, waxaana durbaba Baraha bulshada is qabsaday dodo ku aadan arrintan, iyo sax ahaanshaha Benaadir, waxaase la xusuustaa in maamuladii isaga ka horeeyay ee faafintooda rasmiga ah ay ku bixi jirtay magaca Gobolka Banaadir.
Waxaa durbaba la is weydiiyanaa haddii tani ay noqotay waxqabadkii ugu horeeyay ee Guddoomiyaha, waxa uu noqon karo waxqabadka soo socda ee laga filan karo.
Lama oga is bedelka qoraaleed ee ku yimid magaca Benaadir inuu qeyb ka yahay is bedelo lagu wado in lagu sameeyo Waaxyaha kala duwan ee dowladda Hoose iyo Guddoomiyeyaasha degmooyinka.
Halkan hoose ka akhriso Wareegtada ka soo baxday Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho.